လူကြီးမင်း၏ တိုးတက်လာသောလုပ်ငန်းများ အတွက် ပစ္စည်းအတင်အချပြုလုပ်ရန် ဝန်ထမ်း အတွက် စိတ်ပူရန်မလိုတော့ ပါ။ ✅ဂျပန်နိုင်ငံ လုပ် ၁.၈ တန် Sumitomo brand new forklift ,Reach Type forklift များ ရန်ကုန်သို့ပစ္စည်းရောက်ပါပြီ Reach type ဖြစ်သဖြင့် လျောက်လမ်းမလိုပါ ✅ဘက်ထရီသုံး forklift ဖြစ်၍ ဆီဖိုးကုန်ကျစရိတ်လုံးဝ မရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ အပြင်အငွေ့မထွက်အနံ့ မထွက်သဖြင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း ဆေးဝါးနှင့် စူပါမားကပ်များအတွက်အလွန်အသုံးတည့်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ။ ✅ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ၅ နှစ်အသုံးခံမည်ဖြစ်ပါသည် ။ ကုမ္ပဏီမှ တစ်နှစ် အာမခံဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။ service center လည်းရှိသဖြင့် စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ။ For more information Tiger Supply Company Contact No. +95 943177155, 098622431 , 09785130173 No(19-21) station road, bawk htaw, Yankin.
Jacking Car (ကားချိုင့်ထောက်) (PreOrder)
39000 ~ 79000 Kyats
ကားဘီလှဲဖို. ကားပြင်ဖို. အလွယ်တကူ သယ်နိုင်မယ့် ကားချိုင့်ထောက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ မိမိကားနဲ. သင့်တော်မယ့် ကားချိုင့်ထောက်ကို ရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း2ton = 39000 kyats3ton = 49000 kyats5ton = 59000 kyats 10 ton = 79000 kyats Deliver free in Yangon (PreOrder) ၂ပတ်စောင့်ရပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber ၀၉၇၆၈၄၈၄၈၇၈ ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
FEATURE Durable The balance is tipped that is not affected by vibration Special designed accelerator Rapid acceleration On/Off switch APPLICATION Any type of grass used by Brush Cutter Can be adapted Can be changing to the string
Rotary Air Compressor NORVAX
Rotary Air Compressor NORVAX FEATURE Rotary Air Compressor Compact and Flexible Easy to use Easy to maintanance Durability and longer Europe standard APPLICATION Small applications that require small wind The paint is applied Usingasmall tool that takes the wind Fill the air on accessories that require Blowing dust cleaning
Gasoline Engine All Power FEATURE High quality Gasoline engine Easy to start Long - lasting , durable engine High power Low fuel consumption APPLICATION Used in various applications Install with the paddle boat Install with the mowers Can be use for any application
1788 ~ 1999 $
Hydraulic Rim Straigntening Machine with Lathe - ကားဂွေပြင်စက်
Motor Specifictions:Mechanic 0,55 kw, 1400 rpm, 0,75 hp, 220V-380 V : Hydraulic 0,75 kw 1400 rpm, 1 hp, 220V-380 V : Noise level 35 db Hydraulic Piston Power:Total pressure = TTr2 x 160 (Working pressure bar) :Total pressure = 3,14x (3,15 x 3,15) = 31,156 kgs :Total pressure = 31,156 x 160 =4984,96 kqs ■ This unique machine is used to correct and straighten all kinds of defected steel and alloy rims ranging from 10&quot; to 26&quot;.
Whether you’re digging, trenching, backfilling or handling material,aCat® Backhoe Loader will meet your needs. Building on the success of the E Series Backhoe Loader range, the F Series provides customers with improved performance, visibility and serviceabilit. Cat® Backhoe Loaders featureaworld class operator station withastandard air suspension seat, extra legroom and greater visibility. Ergonomic joystick controls provide smooth operation and low operator effort.